I-Iran ikhulisa ukuzibophezela kwayo emandleni avuselelekayo | Ukuvuselelwa Okuhlaza
UTomàs Bigordà | | I-Biomass, Amandla omoya, amandla wokubacindezela, Amandla we-Hygroelectric, Photovoltaic Solar Amandla, Amandla avuselelekayo
Ngemuva kokulinda isikhathi eside, cishe iminyaka engama-20 yokulinda, selokhu kwaklanywa le phrojekthi, iziphathimandla zase-Iran zivule isitshalo se Amandla elanga kaMokran, esifundazweni esisempumalanga yeKerman. Yinkimbinkimbi enkulu kunazo zonke ezweni futhi inamandla okukhiqiza ama-megawatts angama-20.
Ngokusho kukaNgqongqoshe Wezamandla wase-Iran, Hamid chitchian. “Kuze kube manje sekwenziwe izipesheli zenani le- Izigidi ezingu-3.600 amadola okutshalwa kwezimali angaphandle emandleni avuselelekayo ”.
Njengamanje, i-Iran inamandla amakhulu okukhiqiza amandla avuselelekayo eMiddle East, njengomoya, i-geothermal, i-hydroelectric ne-solar; ngomthamo oyivumela nokuthi ithumele amandla kagesi emazweni angaphandle. I-Iran inezinsuku ezingaphezu kwezingama-300 libalele ngonyaka, imimoya emihle yamandla omoya, kanye nezitshalo ezahlukahlukene zokuphehla ugesi ngamanzi, phakathi kweminye imithombo yamandla evuselelekayo.
1 Amandla elanga
3 Amandla we-Hydraulic
Isenzo esiya ngokuya sivame kuzo zonke izingxenye zesitshalo, esinencazelo elula kakhulu ngokusho kweJalimane uHans-Josef Fell, uMongameli we-Energy Watch Group.
“Manje ubuchwepheshe belanga nomoya bushibhile kakhulu. Kushibhile, ukuthi amandla avela kugesi, uwoyela, amalahle, leyo nyukiliya ...
Esikhathini esizayo esingekude kakhulu, i-Iran izoba nesikhungo samandla elanga esisebenza ngamamegawathi ayi-100, okuzoba yiso ngobukhulu eMiddle East.
I-Iran ibhekwa njengepharadesi le- ukukhiqizwa nokusetshenziswa kwamandla elanga, unesilinganiso samahora angu-2.800 XNUMX elanga ngonyaka. Leli khono kanye nezibonelelo ezinikezwa nguhulumeni zinikeze amathuba amaningi okutshala imali kuleli.
La amandla omoya e-Iran ibilokhu ibhekene nokukhula kokukhiqizwa komoya eminyakeni yamuva nje, futhi inohlelo lokukhulisa kakhulu isizukulwane samanje somoya. I-Iran ukuphela kwesikhungo sokukhiqiza ugesi ophehlwa eMiddle East.A
Ngo-2006, kwakukhona kuphela amamegawathi angama-45 okuphehlwa kukagesi kusuka kumandla omoya afakiwe (wama-30 emhlabeni). Lokhu kube wukwanda ngama-40% kusuka kumamegawathi angama-32 ngonyaka ka-2005. Ngo-2008, izikhungo zamandla omoya zase-Iran eManjil (esifundazweni saseGilan) naseBinaloud (esifundazweni saseKhorasan Razavi) Ama-megawatt ayi-128 kagesi. Ngo-2009, i-Iran yayinamandla akhiqiza amandla kagesi angama-130 MW.
Lo mthamo uyanda minyaka yonke, ngokuvulwa kwamapaki amasha. Ngaphandle kokuqhubeka, ngoMashi owedlule kwavulwa owokugcina. Lokhu kutholakala edolobheni laseTakestan esifundazweni saseQazvin, futhi kunamandla ka-55 MW. Iphrojekthi yathuthukiswa yi Iqembu le-MAPNA lezinkampani, lapho itshale imali engaphezu kwezigidi ezingama-92 zamaRandi.
I-Iran ikhiqiza amamegawathi angaba ngu-10.000 14 wamandla kagesi, okungaphezulu nje kuka-70.000% womkhiqizo ophelele we-XNUMX mv.
Umnotho wezwe nowoyela uyephuza ukuqwashisa ngesidingo sokwenza amandla avuselelekayo, kepha manje sekuqhutshekwa nezinhlelo zokukhulisa ukukhiqizwa kwelanga, umoya kanye ne-hydro.
Esinye sezitshalo ezinkulu zase-Iranian isitshalo seSiah Bishe, isitshalo sokuqala sokuphehla ugesi Isitoreji Esimpontshiwe Ngaphesheya KweMpumalanga Ephakathi, Iphrojekthi Yeshumi Leminyaka
Lo mshini uqukethe amadamu amabili eMfuleni iChalus, anamadamu angama-86 namamitha ayi-104 ukuphakama namamitha angama-49 nama-330 ubude nomthamo cishe wamamitha ama-cubic million ayi-3,5, kuhanjiswa ngamapayipi amakhulu ngaphakathi kwentaba bawisa amanzi ngamandla kuma-turbine ngesikhathi sokufunwa bese bewampompa phezulu ebusuku, lapho kukhona ugesi ongasetshenzisiwe kunethiwekhi.
Uhulumeni ubuye aqhakambise impumelelo yeRiphabhulikhi YamaSulumane "yokwenza lo msebenzi yize ukulinganiselwa okubekwe unswinyo lwamazwe omhlaba" eminyakeni yakamuva.
Isitshalo seSiah Brisheh sabiza cishe ama-euro ayizigidi ezingama-300 futhi sidinga ukuqashwa kwabasebenzi abangaphezu kuka-5.000 XNUMX, kunjalo ixhaswe kuphela ngenhlokodolobha yase-Iranian kanti amaphesenti angama-90 ezobuchwepheshe kanye nezingxenye zawo yi-Iranian.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » I-Iran ikhulisa ukuzibophezela kwayo emandleni avuselelekayo
Ubuphofu bamandla yinkinga enkulu kulo lonke elaseYurophu